Dahalo miisa valo namaky tranombarotra mpamongady iray no maty voatifitry ny zandary ka nitsirara eran’ny tanàna ny fatiny. Raha ny vaovao voaray avy any an-toerana dia enta-madinika avokoa no lasan’izy ireo tamin’izay. Tsy naharitra ela anefa ny zandary fa tao anatin’ilay asa fangalarana mihitsy no niditra an-tsehatra izy ireo. Raikitra ny fifampitifirana, tranga niseho nanomboka tamin’ny 12 ora alina ka hatramin’ny 7 ora maraina. Nanamarika ny teo anivon’ny zandarimariam-pirenena fa mbola hohatevenina hatrany ny ady amin’ny asan-dahalo tahaka izao eto amintsika. Ho an’ireo zandary mandeha amin’ireny faritra mena toa an’i Betroka ireny, ohatra, dia nambaran’ny sekreteram-panjakana miadidy ny zandarimariam-pirenena vaovao ny jeneraly Ravalomanana Richard fa izy ireny no hahazo ny fampiakarana galona voalohany sy ny fanomezana “indemnité”.